Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Sandaly amoron-dranomasina sy amidy Resorts Halloween
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • culinary • Kolontsaina • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Satria fanomezana spooktacular ho an'ny vahiny resort, Kapa sy morontsiraka Manolotra fiaraha-misakafo labozia manokana ho an'ny roa ho an'ny roa ny fivarotana Halloween. Ny mpivady dia hipetraka eo ambony latabatra voaravaka manokana voninkazo tropikaly sy mirehitra amin'ny labozia.
Sakafo gourmet efatra-course no hatolotry ny mpandroso sakafo manokana ary hampidirina ao anaty tavoahangy Ruffino Prosecco sy divay tsy misy fetra an'ny divay Robert Mondavi Twin Oaks®.
Ny hany mila ataon'ny vahiny dia ny mifantina ny toerana voafidiny mba handray anjara amin'ity traikefa fisakafoanana mahafinaritra ity maimaimpoana.
Any amin'ny nosy Antigua, Bahamas, Barbados, Grenada, Jamaica, ary Saint Lucia, dia afaka mamandrika, misoratra anarana ary manara-maso ny vahiny:
Sandaly Regency La Toc
Sandal Halcyon Beach
Ity sakafo hariva fanaovana labozia tsy miankina maimaim-poana ho an'ny roa ity dia misy rehefa mamandrika 6 karama alina na mihoatra. Ny mpitsidika dia tsy maintsy manoratra ny famandrihany mba hahazoany ity tolotra sakafo hariva manokana ity amin'ny alàlan'ny taratasy fisoratana anarana natolotra tao anatin'ny 72 ora taorian'ny famandrihana.
Ny vahiny izay efa namandrika - aza matahotra! Afaka manararaotra an'ity tolotra ity koa izy ireo amin'ny fisoratana anarana fotsiny.
Manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ny vahiny ao amin'ny tranoben'ny seranam-piaramanidin'ireo toeram-pialan-tsasatra, hatrany amin'ny traikefa an-resort rehetra, Sandal dia maniry ny mpitsidika azy ireo hahatsapa ho voaro ary hankafy fialan-tsasatra maimaimpoana. Na eo aza ny zava-mitranga eo amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny vahiny dia afaka miala sasatra amin'ny fahafantarana fa ny Sandals Platinum Protocol of Cleanness dia manan-kery any amin'ny toeram-pialan-tsainy rehetra.
Aza matahotra… mamandraha amin'ny Sandals Beaches and Resorts ary avelao izy ireo handray anao tsara any amin'ny paradisa.